Ny asa fandoavam-bola 30 tsara indrindra ho an'ny nahazo diplaoma tany Amerika 2021 Vaovao farany: Vaovao an-tsekoly ankehitriny
Vaovao momba ny sekoly amin'izao fotoana izao
Portal fanavaozana fanabeazana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao; Fanadinana sy torolàlana akademika, asa be karama sy tranokala vatsim-pianarana
MATERIASA REHETRA REHETRA
Doka! Mahazo fidirana 200 ambaratonga handinihana izay taranja rehetra any amin'ny oniversite tianao amin'ny alàlan'ny IJMB / JUPEB. TSY MISY JAMB | VIDITRA ambany. Mandrosoa ny fisoratana anarana. Antsoy ny 07063900993 ANAO!
Ny asa fandoavam-bola 30 tsara indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma tany Amerika 2021 Vaovao farany
Filed in fanabeazana by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021
ADS! Sintomy ny lozisialy JAMB CBT izao maimaim-poana!
Ity ambany ity ny lisitry ny asa be karama indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma tany Amerika. Araka ny tatitra vao haingana nataon'ny Glassdoor.com, ny mpitsabo sy ny faritra misy ny mpisolovava dia mbola matihanina amin'ny firenena ambony. Raha jerena izany dia toa mahazo tombony ara-bola kokoa ny asa amin'ny fitsaboana sy ny lalàna. Mitadiava antsipiriany etsy ambany.
Mba hanangonana ny lisitr'ireo asa mandoa vola tsara indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma tany Amerika tamin'ny 2021, ny tranonkala dia nanadihady angon-drakitra karama mahazatra tsy fantatra anarana avy amin'ireo mpampiasa azy.
Raha te-ho ao anaty lisitra ny toerana misy ny asa dia tsy maintsy nisy tatitra dimy amby fitopolo farafahakeliny momba ilay asa natolotra tamin'ny taona lasa. Ireo asa an-tsokosoko C dia nesorina tamin'ny tatitra.
Asa mandoa vola tsara indrindra ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma
Ireto ny asa karama telo-polo tsara indrindra, miorina amin'ny lisitr'i Glassdoor.com:
Mariho tsara fa ny karama dia salanisa isan-taona.
Salanisan'ny karama: $ 180,000
Voalohany ao amin'ny lisitry ny asa be karama indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma. Fanafody Tsy ny asa be karama indrindra ao Etazonia ihany, fa ny fananganana mpiasa sy ny filan'ny mpitsabo dia vinavinaina hanatsara ny 14% manomboka amin'ny 2014 ka hatramin'ny 2024.
Io dia avo roa heny noho ny salan'isa nomanina ho an'ny asa rehetra, araka ny nambaran'ny Bureau of Statistics Statistics.
Salanisan'ny karama: $ 144,500
Faharoa, ao amin'ny lisitry ny asa be karama indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma Na dia samy hafa aza ny karama araka ny sampan'ny lalàna izay anjaranao. Ny salan'isan'ny karama dia manan-danja ampy hahatonga ny lalàna ho asa karama farany faharoa any Amerika. Ankoatr'izay, ny pejy lisitra asan'ny Glassdoor dia mampiseho fisokafana eo amin'ny 9,000 ho an'ny ity asa ity.
3. R&D Mnager
Salanisan'ny karama: $ 142,120
Ny mpitantana ny fikarohana sy ny fampandrosoana dia manana andraikitra marobe miankina amin'ny mpitondra, manomboka amin'ny fomban'ny vokatra ary mitarika fiaraha-miasa vaovao hanaraha-maso ireo mpiasa.
4. Mpitantana fampandrosoana ny programa solosaina
Salanisan'ny karama: $ 132,000.
Izany dia azo antoka fa iray amin'ireo asa mandoa vola be indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma. ny Mpitantana fampandrosoana ny programa informatika mamolavola sy manara-maso ny rafitry ny programa informatika. Mazava ny fanantenana amin'ity asa ity; tombanana hitombo manomboka amin'ny 2014 ka hatramin'ny 2024.
5. Mpitantana fivarotam-panafody
Salanisan'ny karama: $ 130,000
Ny fahaizana an-taonany ankoatry ny Ph.D dia takiana matetika. Antenaina hanana izany ny mpivaro-panafody.
6. Mpitantana tetika
Ity dia iray amin'ireo asa be karama farany mitombo ho an'ireo nahazo diplaoma. Matetika ny mpitantana tetika dia manara-maso ny tetikasan'ny orinasa iray hampivelatra ny fiaraha-miasa, handroso ny fitomboana ary hanomboka hetsika fitadiavam-bola vaovao. Ilaina ny mari-pahaizana ary misy mpampiasa vitsivitsy koa mila master, naseho ny lisitr'i Glassdoor.
7. Conputer Program Designer
Salanisan'ny karama: $ 128,250
Ireo mpamolavola programa informatika dia mamokatra programa ary mampita drafitra teknika amin'ireo mpitarika ny orinasa. Ilaina ny bakalorea bakalorea indraindray.
8. injenieran'ny famolavolana solosaina
Salanisan'ny karama: $ 127,500
Ny injenieran'ny famolavolana solosaina dia manome fanohanana elektrika sy fampandrosoana ary hamahana ireo olana momba ny fikirakirana teknika. Manana B.Sc. na M.Sc amin'ny injeniera elektrika dia mahazatra.
9. Mpitantana ny haitao
Salanisan'ny karama: $ 120,000
Ny talen'ny teknolojia fampahalalana dia manamarina fa ny fitaovana ampiasain'ny orinasan'izy ireo tsirairay avy, ny programa momba ny solosaina ary ny tambajotra dia miasa am-pilomanosana ary manatanteraka ny tanjon'ny IT amin'ny fikambanana izy ireo. Indraindray ny mpitantana ny informatika dia manana mari-pahaizana eo amin'ny sehatra manampy fahaizana teknika maro.
10. Mpamolavola vahaolana
Ny arisiva vahaolana dia mitarika na manamora ny fanaingoana ny vokatra sy ny hetsika. Saingy, izy ireo dia miahiahy indrindra amin'ny lafiny teknika amin'ny fanaovana azy ireo. Miovaova ny fepetra takiana amin'ny fanabeazana, manomboka amin'ny diplaoma amin'ny siansa informatika na ny rafitry ny informatika ka hatramin'ny master amin'ny marketing na injeniera.
11. Fifandraisana Manaager
Tompon'andraikitra amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa izy ireo. Mila fahaiza-manao amin'ny varotra sy ny fitantanana tetikasa ny andraikitra. mety hanampy ny fandaharana na ny fahaizana teknika.
12. Applications Developer Manager
Ireo mpitantana ireo dia manara-maso sy manatsara ny rafitra anatiny sy kaody amin'ny solosaina. Ilaina ny diplaoma sy ny fahaizana an-taonany maro hafa eo amin'ny sehatra.
13. Mpivarotra fanafody
Salanisan'ny karama: $ 118,000
Nahazo karama tsara ny mpivarotra fanafody. Na izany aza, hanana ora maro izy ireo ary antenaina hiasa amin'ny faran'ny herinandro. Ilaina ny fananana diplaoma dokotera.
14. Mpamorona rafitra
Salanisan'ny karama: $ 116,920
Ireo mpamolavola ireo dia manangana sy mitazona tahiry, firaketana programa ary fandaharana amin'ny orinasa. Ny mari-pahaizana bakalorea na akademika amin'ny sehatry ny injeniera, ny siansa ampiharina, na ny sehatra mifandray.
15. Mpitantana vola
Salanisan'ny karama: $ 115,000
Matetika izy ireo dia manana fahaiza-manao 5 na taona maro amin'ny resaka fitantanam-bola, fitantanam-bola, na sehatra mifandray, ankoatra ny mari-pahaizana.
16. Mpanadihady data
Ny mpahay siansa momba ny informatika sy ny fanadihadiana dia mamaha ny olana mandroso amin'ny informatika. Ny asa ho an'ity asa ity dia vinavinaina hitombo iraika ambin'ny folo isan-jato hatramin'ny 2014 ka hatramin'ny 2024, izay haingana kokoa noho ny mahazatra.
17. Mpitantana loza
Ny mpitantana risika dia miady amin'ny fiantohana, ny trosa ary ny fanarahan-dalàna. Miovaova be ny filan'ny asa sy ny fanabeazana, miloka amin'ny orinasa.
18. Mpandrindra mpamorona
Ny mpitantana famoronana dia manatanteraka hetsika varotra vaovao ho an'ny fikambanana iray, mitarika stigmatization sy style. miovaova ny filan'ny asa, na izany aza, ny memoir amin'ny leadership dia manampy.
Vakio ihany koa:
Masoivoho 17 momba ny fitsikilovana ambony indrindra any Etazonia
Fepetra takiana amin'ny mari-pahaizana momba ny fanabeazana aizana
Ahoana ny fomba hanombohana orinasam-pananana kely any Nizeria miaraka amin'ny fahazoan-dàlana
Antony tokony anananan'ny mpianatra ny diplaoma amin'ny toeram-pampianarana amin'ny Internet
30 fomba tsy manam-paharoa hahazoana vola any Afrika Atsimo 2018
Actuaries hamakafaka ny risika sy ny fisalasalana momba ny vola. Ny fampiasan'ny actuaries dia andrasana hitombo pc 2014 mahery manomboka amin'ny 2024 ka hatramin'ny XNUMX, hoy ny BLS.
20. Planner momba ny fampahalalana
Salanisan'ny karama: $ 113,000
Ireo arsitekn data dia mamokatra info sy sarintany momba ny teknolojia ho an'ny fikambanana. Matetika ny toerana dia mila fahaizana teknika sy / na BS amin'ny siansa fampiharana na rafi-panazavana.
21. Mpitantana hetra
Salanisan'ny karama: $ 110,000
Manomana ny fiverenan'ny hetra federaly sy ny fanjakana ho an'ny olona sy ny orinasa ny mpitantana hetra. Miaraha amin'ny lehilahy amin'ny oniversite mpitsabo na diplaoma amin'ny kaonty no ilaina.
22. Mpitantana ny vokatra
Salanisan'ny karama: $ 107,000
Ireo mpitantana ireo dia manan-danja amin'ny ekipa fampandrosoana ny vokatra ao amin'ny fikambanana, manompo mba hahazoana antoka fa misy vokatra vaovao azo alaina ara-potoana. Misy tolotra asa maherin'ny 7,000 ho an'ity toerana ity.
Salanisan'ny karama: $ 106,500
Vondron-kevitry ny talen'ny famolavolana tompon'andraikitra amin'ny sary an-tsaina sy ny sazy mihatra amin'ny mpanjifa na ny fahaizan'ny mpanjifa miaraka amin'ny fikambanana. Miovaova arakaraka ny indostria ny adidy.
24. Analytics Manager
Salanisan'ny karama: $ 106,000
Ity asa ity dia mila traikefa amin'ny statistika sy famakafakana vaovao. Ity toerana ity dia manana fisokafana asa an'arivony.
25. MPITONDRA SISTEMA INFO.
Mivelatra amin'ny lafiny andraikitra io andraikitra io. Ny mpitantana infosystems dia manara-maso ny fampahalalana isan-karazany amin'ny orinasa.
Salanisan'ny karama: $ 95,710
Tombanana hitombo 9 isan-jato.
27. Mpandinika Security Data
Salanisan'ny karama: $ 92,600
Ilaina betsaka noho ny hatramin'izay ny fiarovana ny cyber. Ny tahan'ny fitomboana 10 isan-jato.
28. Mpanolo-tsaina ara-bola
Salanisan'ny karama: $ 90,530
29. Mpiandraikitra mpanamboatra
Salanisan'ny karama: $ 89,300
30. Dokotera veterinera
Salanisan'ny karama: $ 88,770
Inona no andraisanao an'ity? Mino izahay fa nanampy ity lahatsoratra ity, raha eny, aza misalasala mizara izany vaovao izany amin'ny namanao ao amin'ny Facebook, Twitter, Whatsapp, ary Google plus.
Ampidiro ny adiresy email:
Navoaka tamin'ny TMLT NIGERIA
Midira amin'ny mpamaky mihoatra ny 3,500 000 an-tserasera izao!
=> MANARAKA ANAY Instagram | FACEBOOK & TWITTER Ho an'ny fanavaozana farany
=> MIFANDEHA AMIN'NY MPITSIDAKO NY ZAZAKELO IZAO
ADS: DIABETES KNOCK-OFF ao anatin'ny 60 andro! - DIDIO NY ANAO
FAMPITANDREMANA COPYRIGHT! Ny atiny amin'ity tranonkala ity dia mety tsy havoaka, haverina, zaraina indray amin'ny ampahany na amin'ny ampahany tsy misy alalana na fanekena. Ny atiny rehetra dia arovan'ny DMCA.
Ny atiny amin'ity tranonkala ity dia navoaka tamina fikasana tsara. Raha manana an'ity atiny ity ianao ary mino fa voahitsakitsaka na voahitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao dia alao antoka fa mifandray aminay amin'ny [[email voaaro]] hametraka fitarainana ary horaisina avy hatrany ny hetsika.
Asa mandoa vola be indrindra any Nizeria 2021 Jereo ny Vaovao farany
Asa be karama indrindra any Amerika ho an'ireo nahazo diplaoma tamin'ny 2021
Ireo kariera 50 be karama indrindra ary manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny 2020
Fanombanana ny fanentanana sy ny fampiasana ny lalàna momba ny fahalalahan'ny fahalalàna, 2011, nataon'ny mpanao gazety Broadcast 'ao amin'ny fanjakana Kogi
Fandraisana fangatahana filankevitra nasionaly momba ny fitantanana matetika 2021/2022
Misorata anarana izao amin'ny EGINA Job Vacancy ho an'ny injeniera fametrahana UFR
Mangataha fampindramam-bola ho an'ny mpianatra Chase Bank 2021
Tags: asa be karama indrindra eran-tany 2021, asa be karama indrindra any Etazonia 2021, asa be karama indrindra tsy misy diplaoma, asa be karama indrindra eran'izao tontolo izao 2020, asa ambony be karama 100
URL miverina | Fanamarihana RSS Feed
Jolay 27, 2018 amin'ny 10: 04 am
Toa ahy ity lahatsoratra ity
« Fampahalalana mifandraika amin'ny seranam-piaramanidina tsara indrindra Nizeriana - An-trano sy iraisam-pirenena
Essay Solution Solution, jereo ny torolàlana sy ohatra azo tsapain-tanana »
Scheme vatsim-pianarana MTN 2021 ho an'ny mpianatra Nizeriana rehetra
MasterCard Nigeria Fandraisana mpiasa 2021/2022 Portal momba ny fangatahana
Netcom Africa Job Recruitment 2021 Jereo ny Latest Application Guide
Fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny asa fivezivezena momba ny fifindra-monina 2021 www.nigeria.iom.int
Fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fandraisana mpiasa mpifindra monina 2021 Application Portal
Jereo ny Netcom Africa Limited Job Vacancy Portal 2021 www.netcomafrica.com
Netcom Africa Limited Recruitment 2021/2022 Application Formal Portal
KENPOLY Post UTME Fanontaniana taloha 2021 & Valiny Download PDF
Aogositra 2021 Hafatra fanasana ho an'ny olon-tiana
Fanavaozana ny vavahady fampiharana Oracle Nigeria Recrementment 2021/2022
FCC Ibadan Post UTME Fianarana 2021/2022 Fianarana akademika
Toro làlana fisoratana anarana UMYU 2021/2022 Fivoriana akademika ho an'i Fresher
FCC Ibadan HND Fandraisana fidirana form 2021/2022 Fampiharana fivoriana
Lisitry ny fidirana FUD 2021/2022 Fianarana akademika | Fanavaozana ny vavahady
Ny saram-pianaran'ny oniversite Spiritan 2021/2022 ho an'ny mpianatra vaovao sy miverina
KENPOLY HND Fandraisana fandraisana anjara 2021/2022 Fampiharana fizarana ho an'ny fivoriana
Tapaka ny oniversite any atsimo andrefana Marka 2021/2022 Tapaka ny hevitra nataon'ny departemanta
© 2021 Vaovao momba ny sekoly ankehitriny. Zo rehetra voatokana..